Matio 24 amin'ny farany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny hoavy > Matio 24 momba ny farany
Mba hialana amin’ny fandikana diso dia zava-dehibe aloha ny fahitana ny Matio 24 ao amin’ny teny manodidina (contexte) lehibe kokoa amin’ireo toko teo aloha. Mety ho gaga ianao raha mahafantatra fa manomboka amin’ny toko faha-24, andininy faha-16 farafahatarany ny tantaran’ny Matio 21. Izao no voalaza ao amin’ny famintinana: “Hatramin’izany andro izany Jesosy dia nanomboka naneho tamin’ny mpianany ny amin’ny tsy maintsy hankanesany any Jerosalema sy ny fampahorian’ny loholona sy ny lohan’ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna ary hovonoina sy hitsangana amin’ny andro fahatelo Izy”. Tamin’izany no nanomezan’i Jesosy teny voalohany ny amin’ny zavatra iray izay, teo imason’ny mpianatra, dia toy ny fitsapam-pahefana fototra teo amin’i Jesosy sy ireo manam-pahefana ara-pivavahana tao Jerosalema. Teny an-dalana ho any Jerosalema (20,17:19) dia nanohy nanomana azy ireo hiatrika an’io ady mananontanona io izy.
Tamin’ny fotoana nanambarana voalohany ny fijaliana, Jesosy dia nitondra an’i Petera sy Jakoba ary Jaona mpianatra telo lahy niaraka taminy niakatra tany an-tendrombohitra avo. Tao no niainan’izy ireo ny Fiovan-tarehy (17,1-13). Noho izany antony izany ihany, dia tsy maintsy nanontany tena ny mpianatra raha toa ka tsy ho akaiky ny fananganana ny fanjakan’Andriamanitra.7,10- iray).
Nambaran’i Jesosy tamin’ny mpianany koa fa hipetraka eo amin’ny seza fiandrianana roa ambin’ny folo izy ireo ary hitsara ny Isiraely “rehefa mipetraka eo amin’ny seza fiandrianan’ny voninahiny ny Zanak’olona” (Gen.9,28). Tsy isalasalana fa niteraka fanontaniana indray momba ny “oviana” sy “ahoana” ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra izany. Nanosika ny renin’i Jakoba sy Jaona mihitsy aza ny renin’i Jakoba sy Jaona mba hangataka an’i Jesosy hanome ny zanany roa lahy toerana manokana ao amin’ny fanjakana ( 20,20:21 ).
Avy eo dia tonga ny fidirana feno fandresena tao Jerosalema, izay nitaingina boriky tao an-tanàna1,1-11). Ho vokany, araka ny voalazan’i Matio, dia tanteraka ny faminanian’i Zakaria, izay hita fa mifandray amin’ny Mesia. Nitsangana ny tanàna manontolo, ka nanontany tena hoe inona no hitranga rehefa tonga i Jesoa. Tany Jerosalema dia nazerany ny latabatry ny mpanakalo vola ary nasehony tamin’ny asa sy ny fahagagana hafa ny fahefany mesia.1,12-27). "Iza ilay?" gaga ny olona (21,10).
Avy eo Jesosy dia nanazava ao amin’ny 21,43 Ho an’ny lohan’ny mpisorona sy ny loholona: “Ary noho izany dia lazaiko aminareo fa hesorina aminareo ny fanjakan’Andriamanitra ka homena izay olona mahavokatra ny voany”. Fantatry ny mpihaino azy fa niresaka momba azy ireo izy. Io tenin’i Jesosy io dia azo raisina ho fanehoana fa efa hanorina ny fanjakany mesia izy, fa ny “fiorenana” ara-pivavahana dia tokony hijanona ao anatiny.
Hamboarina ve ny fanjakana?
Ireo mpianatra nandre izany dia tsy maintsy nanontany tena izay hitranga. Te hiantso ny tenany ho Mesia ve avy hatrany i Jesosy? Sa hiady amin'ny manam-pahefana romanina ve izy? Moa ve izy efa saika hitondra ny fanjakan'Andriamanitra? Dia hisy ady, ary inona no hitranga amin'i Jerosalema sy ny tempoly?
Tonga eo amin’ny Matio 22, andininy 1 isika izao5. Nanomboka teo ny fisehoan-javatra tamin’ireo Fariseo nanandrana nitaona an’i Jesosy ho ao anatin’ny fandrika tamin’ny fanontaniana momba ny hetra. Tamin’ny valin-teniny dia te hampiseho azy ho mpikomy tamin’ny manam-pahefana romana izy ireo. Namaly tamim-pahendrena anefa i Jesosy, ka voasakana ny fikasan’izy ireo.
Tamin’io andro io ihany, dia niady hevitra tamin’i Jesosy koa ny Sadoseo2,23-32). Tsy nino ny fitsanganana amin’ny maty izy ireo, ary nanontany azy koa ny fanontaniana mamitaka momba ny rahalahy fito manambady an’io vehivavy io. Ho vadin’iza izy amin’ny fitsanganana amin’ny maty? Namaly an-kolaka i Jesoa ka nilaza fa tsy azon’izy ireo ny soratra masin’izy ireo. Nampisavoritaka azy izy tamin’ny filazana fa tsy misy fanambadiana eto amin’ny fanjakana.
Ary tamin'ny farany dia nanontany Azy ny Fariseo sy ny Sadoseo ny amin'ny didy ambony indrindra ao amin'ny lalàna2,36). Namaly tamim-pahendrena izy tamin’ny filazana 3. Mosesy 19,18 ary 5. Mosesy 6,5. Ary ny anjarany dia namaly tamin'ny fanontaniana mamitaka: Zanak'iza ny Mesia (Eks2,42)? Dia tsy maintsy nangina izy ireo; “Tsy nisy nahavaly Azy na dia teny iray akory aza, ary hatramin’izany andro izany dia tsy nisy sahy nanontany Azy intsony” (Eks2,46).
Ny toko 23 dia mampiseho ny polemik'i Jesosy amin'ireo mpanora-dalàna sy ny Fariseo. Hatramin'ny fiafaran'ny toko dia nanambara i Jesosy fa handefa "mpaminany sy mpahay lalàna ary mpanora-dalàna" ho azy ireo izy ary naminany fa hamono, hohomboana, hanangana olona ary hanenjika azy ireo. Apetrany eo an-tsorony ny mpaminany rehetra maty. Miharihary fa mitombo ny fihenjanana ary tsy maintsy nanontany tena ny mpianatra hoe inona ny dikan'ireo fifandonana ireo. I Jesosy ve sa efa haka fahefana amin'ny maha Mesia?
Avy eo i Jesosy dia niresaka an’i Jerosalema tamin’ny alalan’ny vavaka ary naminany fa “ho lao” ny tranony. Manaraka izany ilay teny mampikorontan-tsaina manao hoe: “Fa lazaiko aminareo: Hatramin’izao dia tsy hahita Ahy intsony ianareo mandra-pilazanareo hoe: Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah”. (23,38-39.) Azo inoana fa vao mainka nanahiran-tsaina ny mpianatra ka nanontany tena momba ny zavatra nolazain’i Jesosy. Saika hanazava ny tenany ve izy?
Ilay fandringanana ny tempoly dia naminany
Dia nandao ny tempoly Jesosy. Rehefa nivoaka izy ireo, dia nanondro ny tranon’ny tempoly ireo mpianany sempotra. Niara-nilaza tamin’i Markus izy ireo hoe: “Tompo ô, jereo ny karazana vato sy trano toy inona!” (13,1). Nanoratra i Lioka fa talanjona ny amin’ny “vatony sy ny firavaka nataony” ny mpianany (2).1,5).
Diniho izay tsy maintsy ho tao am-pon'ireo mpianatra. Ny tenin'i Jesosy momba ny faharavana an'i Jerosalema sy ny fifandonana tamin'ny manam-pahefana ara-pivavahana dia nampatahotra sy nampientanentana ny mpianatra. Mety ho nanontany tena ianao hoe maninona no niresaka momba ny fianjeran'ny Jodaisma sy ireo andrim-panjakany. Moa ve ny Mesia tsy ho avy mampahery? Avy amin'ny tenin'ny mpianatra momba ny tempoly dia misy fiheverana tsy mivantana: tsy tokony ho simba ve ity fiangonana mahery ity?
Nosakanan’i Jesosy ny fanantenan’izy ireo, ary nohamafisin’izy ireo ny fiheverana mahatahotra. Nofoanany ny fiderana ny tempoly: “Tsy hitanao va izany rehetra izany? Lazaiko aminareo marina tokoa: Tsy hisy vato hitoetra eo ambonin’ny vato hafa izay tsy hovakivakina » (Eks4,2). Tsy maintsy ho nanafintohina mafy ny mpianatra izany. Nino izy ireo fa hamonjy an’i Jerosalema sy ny Tempoly ny Mesia, fa tsy handrava. Rehefa niresaka momba ireo zavatra ireo i Jesosy, dia tsy maintsy nieritreritra ny hiafaran’ ny fitondran’ ny jentilisa sy ny fitsanganan’ ny Isiraely amin’ ny voninahitra; samy faminaniana im-betsaka ao amin’ny soratra hebreo. Fantatr’izy ireo fa hitranga amin’ny “andro farany” ireo fisehoan-javatra ireo, amin’ny “fotoana farany” (Daniela 8,17; 11,35 & 40; 12,4 ny u. 9). Dia tokony hiseho na “ho avy” hanorina ny fanjakan’Andriamanitra ny Mesia. Midika izany fa hiakatra ho amin’ny fahalehibeazan’ny firenena ny Isiraely ary ho loha-lefon’ny empira.
Rahoviana no hitranga?
Ireo mpianatra — izay nandray an’i Jesosy ho Mesia — dia mazava ho azy fa nahatsapa ho te hahafantatra raha efa tonga izao ny “andro farany”. Nanantena mafy ny hanambaran’i Jesosy tsy ho ela fa Izy no Mesia (Jao 2,12-18). Tsy mahagaga àry raha nampirisika an’ilay mpampianatra hanazava ny amin’ny fomba sy ny fotoana “fiaviany” ny mpianatra.
Rehefa nipetraka teo amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy, dia nanatona azy ireo mpianatra falifaly ary naniry ny hahazo fanazavana “ny olona ao anatiny”. Hoy izy ireo: “Lazao aminay hoe rahoviana no hitranga izany? ary inona no ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan’izao tontolo izao? (Matio 24,3.) Te hahafantatra izy ireo hoe rahoviana no hitranga ireo zavatra naminanian’i Jesosy momba an’i Jerosalema, satria tsy isalasalana fa nampifandraisina tamin’ny andro farany sy ny “fiaviany” izany.
Rehefa niresaka momba ny "ho avy" ireo mpianatra dia tsy tonga tao an-tsaina ny hoe "faharoa". Araka ny hevitr'izy ireo dia ho avy ny Mesia ary tsy ho ela dia hanangana ny fanjakany any Jerosalema, ary tokony haharitra "mandrakizay". Tsy fantany ny fizarazarana ho avy "voalohany" sy "faharoa".
Hevitra manan-danja iray hafa mihatra amin’ny Matio 24,3 tokony hojerena, satria karazana famintinana ny votoatin’ny toko faha-2 manontolo io andininy io4. Avelao hamerina ny fanontanian’ny mpianatra ka hametraka teny fototra vitsivitsy amin’ny sora-mandry: “Lazao aminay”, hoy izy ireo, “rahoviana no hitranga izany? ary inona no ho famantarana ny fihavianao sy ny fahataperan’izao tontolo izao? Tian’izy ireo ho fantatra hoe rahoviana no hitranga ny zavatra naminanian’i Jesosy momba an’i Jerosalema, satria nampifandraisina tamin’ny “faran’izao tontolo izao” (ny tena marina: faran’izao tontolo izao, vanim-potoana) sy ny “fiaviany”.
Fanontaniana telo avy amin'ny mpianatra
Fanontaniana telo avy amin’ny mpianatra no nipoitra. Voalohany, tiany ho fantatra hoe rahoviana no hitranga “izany”. Ny hoe “izany” dia mety hidika ho fandravana an’i Jerosalema sy ny tempoly izay vao avy naminanian’i Jesosy horava. Faharoa, tiany ho fantatra izay “famantarana” hanambara ny fiaviany; Nilaza tamin’izy ireo i Jesosy, araka ny ho hitantsika, any aoriana any, ao amin’ny toko faha-24, andininy faha-30. Ary fahatelo, ny mpianatra dia naniry hahafantatra ny fotoana hahatongavan’ny “farany”. Nilaza tamin’izy ireo i Jesosy fa tsy natao hahalala izany izy ireo4,36).
Raha dinihina manokana ireo fanontaniana telo ireo - sy ny valintenin'i Jesosy - dia mamonjy ny tenantsika amin'ireo olana sy fandikana diso mifandraika amin'ny Matio 24 isika. Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy fa ho rava tokoa i Jerosalema sy ny tempoly (ilay “izay”) mandritra ny androm-piainany. Ny “famantarana” nangatahin’izy ireo anefa dia mifandray amin’ny fiaviany, fa tsy ny fandravana ny tanàna. Ary ny fanontaniana fahatelo dia namaly izy fa tsy misy mahalala ny ora hiverenany sy ny "faran'izao tontolo izao".
Koa fanontaniana telo ao amin’ny Matio 24 sy valiny telo misaraka no nomen’i Jesosy azy ireo. Ireo valim-panontaniana ireo dia manaisotra ireo trangan-javatra izay mamorona vondrona iray ao amin'ny fanontanian'ny mpianatra ary manapaka ny toe-javatra ara-nofo. Mety ho amin’ny hoavy ny fiverenan’i Jesosy sy ny “faran’izao tontolo izao”, na dia efa ela be aza ny fandravana an’i Jerosalema (70 am.f.i.).
Tsy midika akory izany - araka ny nolazaiko - fa nisaraka tamin'ny "farany" ny fandravana an'i Jerosalema ny mpianatra. Efa ho 100 isan-jato no azo antoka fa tsy nanao izany izy ireo. Fanampin’izany, nanantena ny hisian’ny fisehoan-javatra tsy ho ela izy ireo (ny teolojiana dia mampiasa ny teny teknika hoe “eo ho eo antenaina” amin’izany).
Andeha hojerentsika ny fomba amina ireo fanontaniana ireo ao amin'ny Matio 24. Voalohany indrindra, mahita fa i Jesosy dia toa tsy manana fijery manokana amin'ny firesahana momba ny toe-javatra "farany". Ireo mpianatra dia manao drill, ary mametraka fanontaniana ary mamaly azy ireo i Jesosy ary manazava fanazavana.
Fantatsika ihany koa fa ny fanontanian'ireo mpianatra momba ny "faran'ny" dia azo inoana fa mifototra amin'ny fahatongavan-dratsy - fa tsy ho ela dia hitranga ny hetsika ary amin'ny fotoana mitovy. Tsy mahagaga raha nanantena izy ireo fa ho avy i Jesosy amin'ny maha-Mesia akaiky, amin'ny fahatsapana fa mety hitranga ao anatin'ny andro na herinandro vitsivitsy. Na izany aza dia mila "famantarana" fatratra ny fahatongavany ho fanamafisana. Noho izany fanombohana na fahalalana miafina izany dia naniry ny hametraka ny tenany amin'ny toerana mahasoa izy ireo rehefa nanao ny diany i Jesosy.
Amin'izany toe-javatra izany, tokony hahita ny hevitr'i Jesosy ao amin'ny Matio 24 isika. Mampahery ny mpianatra. Mino izy ireo fa i Jesosy dia miomana handray fahefana ary te hahafantatra ny "rahona". Mila famantarana fanomanana ianao. Nanao izany tanteraka izy ireo rehefa nanao izany.
Ny farany: tsy mbola
Raha tokony hamaly ireo fanontanian'ireo mpianatra araka izay iriny mivantana, i Jesosy dia nampiasa ny fotoana hampianarana azy ireo fampianarana telo lehibe.
Ny lesona voalohany:
Ny toe-javatra nangatahan'izy ireo dia sarotra kokoa noho ny noheverin'ny mpianatra naïve.
Ny lesona faharoa:
Rehefa "tonga" i Jesosy - na araka ny holazaintsika hoe: "miverina" - tsy natao ho azy ireo.
Ny lesona fahatelo:
Tokony “hiambina” ny mpianatra, eny, fa mibanjina bebe kokoa hatrany ny fifandraisany amin’Andriamanitra, fa tsy ny zava-mitranga eo an-toerana na maneran-tany. Raha jerena ireo fotopoto-pitsipika ireo sy ny fifanakalozan-kevitra teo aloha, dia andeha hojerentsika izao ny fivoaran’ny resaka nifanaovan’i Jesosy tamin’ny mpianany. Voalohany indrindra, dia nampitandrina azy ireo izy mba tsy ho voafitaky ny zava-mitranga mety ho toy ny zava-mitranga amin’ny faran’ny andro nefa tsy (24, 4-8). Tsy maintsy hitranga ny “tsy maintsy” mahery vaika sy loza, “fa tsy mbola tonga ny farany” (and. 6).
Avy eo Jesosy dia nanambara fanenjehana sy korontana ary fahafatesana tamin'ny mpianatra4,9-13). Azo antoka fa nampahatahotra azy izany! « Inona izany resaka fanenjehana sy fahafatesana izany ? tsy maintsy nieritreritra izy ireo. Tokony handresy sy handresy ny mpanara-dia ny Mesia, fa tsy hovonoina sy haringana, hoy izy ireo.
Avy eo i Jesosy dia nanomboka niresaka momba ny ilàna ny fitoriana filazantsara amin’izao tontolo izao. Aorian’izay dia “ho tonga ny farany” (24,14). Tsy maintsy ho nampisafotofoto ny mpianatra koa izany. Nihevitra angamba izy ireo fa “ho avy” aloha ny Mesia, avy eo dia hampiorina ny fanjakany, ary amin’izay vao hiely amin’izao tontolo izao ny tenin’i Jehovah (Isaia 2,1- iray).
Manaraka izany dia toa nitodika indray i Jesosy ary niresaka momba ny faharavan’ny tempoly. Tokony hisy “fahavetavetana mandrava ao amin’ny fitoerana masina”, ary “izay any Jodia aoka handositra ho any an-tendrombohitra.” ( Matio 24,15-16). Lazaina fa horohoro tsy manam-paharoa no manjo ny Jiosy. "Fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe, izay tsy mbola nisy toa azy hatrizay niandohan'izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny, ary tsy hisy intsony," hoy Jesosy (24,21). Voalaza fa tena mahatsiravina tokoa izany ka tsy hisy ho velona intsony raha tsy nohafohezina ireo andro ireo.
Na dia manana fomba fijery maneran-tany koa aza ny tenin’i Jesosy, dia ny zava-nitranga tany Jodia sy Jerosalema no tena resahiny. “Fa hisy fahoriana lehibe amin’ny tany sy fahatezerana amin’ity firenena ity”, hoy i Lioka, izay mamaritra ny teny manodidina ny tenin’i Jesosy (Lioka 2.1,23, Baiboly Elberfeld, nampian’ny tonian-dahatsoratra). Ny fampitandreman'i Jesosy dia mifantoka amin'ny Tempoly, Jerosalema ary Jodia, fa tsy izao tontolo izao. Ny fampitandremana apokaliptika noresahin’i Jesosy dia mihatra indrindra amin’ireo Jiosy tany Jerosalema sy Jodia. Ny zava-nitranga tamin’ny taona 66-70 am.f.i. nanamafy izany.
Mandosira - amin'ny Sabata?
Tsy mahagaga àry raha nilaza toy izao i Jesosy: “Fa angataho ny tsy handosiranareo na amin’ny ririnina na amin’ny Sabata.” ( Matio 2 Kor.4,20). Misy manontany hoe: Nahoana i Jesosy no milaza ny Sabata nefa tsy manan-kery ho an’ny Fiangonana intsony ny Sabata? Koa satria tsy mila manahy momba ny Sabata intsony ny Kristianina, nahoana izany no voalaza manokana eto ho sakana? Nino ny Jiosy fa voarara ny mandeha amin’ny Sabata. Toa nanana fandrefesana ny halavirana ambony indrindra azo nolalovana tamin’io andro io mihitsy aza izy ireo, dia ny “lalana Sabata” (Asan’ny Apostoly). 1,12). Ho an’i Lioka dia mifanitsy amin’ny halaviran’ny Tendrombohitra Oliva sy ny afovoan-tanàna izany (araka ny tovana ao amin’ny Baiboly Lotera dia 2000 hakiho izany, manodidina ny 1 kilometatra). Nilaza anefa i Jesosy fa ilaina ny mandositra lavitra any an-tendrombohitra. Tsy hanafaka azy ireo amin’ny loza ny “lalana Sabata”. Fantatr’i Jesosy fa mino ny mpihaino azy fa tsy mahazo mandositra lavitra amin’ny Sabata izy ireo.
Izany dia manazava ny antony nanontaniany ny mpianatra mba hangataka ny tsy hanidina amin'ny andro sabata. Ity fangatahana ity dia tsy maintsy hita eo amin'ny toe-javatra takin'izy ireo ny lalàn'i Mosesy. Azontsika atao ny mamintina ny fomba fisainan'i Jesosy amin'ity fomba ity: Fantatro fa tsy mino ny dia lavitra amin'ny Sabata ianao, ary tsy hanao izany ianao satria mino fa mitaky ny lalàna izany. Ka raha latsaka amin'ny andro sabata ny zavatra izay ho tonga amin'i Jerosalema, dia tsy handositra azy ireo ianareo ary hahita fahafatesana. Noho izany dia manoro hevitra anao aho hivavaka mba tsy handosiranao amin'ny andro Sabata. Satria na dia nanapa-kevitra ny handositra aza izy ireo, ny sakana fitsangatsanganana izay misy amin'ny ankapobeny izao dia eo amin'ny tontolo jiosy.
Araka ny voalaza tetsy aloha, dia azontsika ampifandraisina amin’ny fandravana an’i Jerosalema, izay nitranga tamin’ny taona 70 am.f.i., io ampahany amin’ny fampitandreman’i Jesosy io. Kristianina jiosy tao Jerosalema izay mbola nitandrina ny lalàn’i Mosesy (Asa 21,17-26), ho voa sy tsy maintsy handositra. Nifanohitra tamin’ny feon’ny fieritreretana tamin’ny lalàn’ny Sabata izy ireo raha tsy maintsy nandositra ny toe-javatra tamin’io andro io.
Mbola tsy ilay "famantarana"
Nandritra izany fotoana izany, dia nanohy ny lahateniny i Jesosy, ary ny tanjon’izany dia ny hamaly ireo fanontaniana telo napetraky ny mpianany momba ny “Rahoviana” hahatongavany. Marihina fa hatramin’izao dia tsy mbola nanazava tamin’izy ireo fotsiny ny fotoana tsy hahatongavany. Avahana amin’ny “famantarana” sy ny fiavian’ny “farany” ny loza hanjo an’i Jerosalema. Tamin’izay fotoana izay dia tsy maintsy nino ny mpianatra fa ny fandravana an’i Jerosalema sy Jodia no “famantarana” notadiaviny. Diso anefa izy ireo, ary nasehon’i Jesosy ny fahadisoany. Hoy izy: “Raha misy milaza aminareo hoe: Indro, indro ny Kristy! na any!, dia tsy hino ianareo» (Matio 24,23). Tsy mino izany? Inona no tokony hoeritreretin’ny mpianatra momba izany? Tsy maintsy nanontany tena ianao hoe: Mangataka valiny izahay hoe rahoviana izy no hanorina ny fanjakany, mangataka aminy izahay mba homeny famantarana, ary rehefa tsy tonga ny farany, dia tsy miteny afa-tsy izy, ary milaza zavatra izay toa mitovy ny endri-tsoratra fa tsy izy.
Na izany aza, dia mbola nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy hoe rahoviana izy no tsy ho avy, dia tsy hiseho. Koa raha misy manao aminareo hoe: Indro, any an-efitra Izy, aza mivoaka; jereo fa ao an-trano izy !, aza mino izany »(24,26). Te hanazava izany izy: Tsy tokony ho voafitaka ny mpianatra, na ny zava-mitranga eran-tany, na ny olona nino fa efa tonga ny famantarana ny farany. Angamba te hilaza amin’izy ireo mihitsy aza izy fa tsy manambara “ny farany” koa ny fianjeran’i Jerosalema sy ny tempoly.
Andininy faha-29. Eto Jesosy dia nanomboka nilaza zavatra tamin’ny mpianany momba ny “famantarana” ny fiaviany, izany hoe, namaly ny fanontanian’izy ireo faharoa. Ny masoandro sy ny volana dia tokony ho maizina, ary ny "kintana" (angamba kometa na meteorita) dia tokony hianjera avy any an-danitra. Tokony hihozongozona ny rafi-masoandro manontolo.
Farany, dia nomen’i Jesosy ny mpianany ilay “famantarana” andrasany. Hoy izy: “Ary amin’izay dia hiseho any an-danitra ny famantarana ny Zanak’olona. Ary amin’izany ny taranaka rehetra ambonin’ny tany dia hisaona ka hahita ny Zanak’olona avy eo amin’ny rahon’ny lanitra amin-kery lehibe sy voninahitra » (Eks.4,30). Avy eo Jesosy dia nangataka ny mpianany mba hianatra fanoharana momba ny aviavy4,32-34). Raha vao malemy ny rantsana ary manomboka mamony ny raviny, dia fantatrao fa manakaiky ny fahavaratra. “Ary toy izany koa, rehefa hitanareo izany rehetra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa mby akaiky ny varavarana Izy” (24,33).
«Izany rehetra izany» - inona izany? Ady sy horohoron-tany ary mosary ve no etsy sy eroa? No. Vao fanombohan'ny asa ity. Mbola maro ny fahoriana alohan'ny "farany". Mifarana amin'ny fisehoan'ny mpaminany sandoka sy ny fitoriana ny filazantsara ve izany rehetra izany? Ary indray, tsia. Tanteraka ve izany "rehetra" izany tamin'ny filàna tao Jerosalema sy ny fandravana ny tempoly? No. Ka inona no tsy maintsy ampidirinao ao ambanin'ny "izany rehetra izany"?
Alohan'ny hamalianantsika, dia fiviliana kely, miandry ny fotoana izay tsy maintsy nianaran'ny fiangonana apostolika sy izay lazain'ny Filazantsaran'ny Sinoptika. Ny fianjeran’i Jerosalema tamin’ny taona 70, ny faharavan’ny tempoly sy ny fahafatesan’ny mpisorona sy mpitondra teny jiosy maro (ary ny apostoly sasany) dia tsy maintsy ho namely mafy ny fiangonana. Saika azo antoka fa nino ny Fiangonana fa hiverina avy hatrany i Jesosy aorian’ireo fisehoan-javatra ireo. Tsy tanteraka anefa izany, ary tsy maintsy nanafintohina ny Kristianina sasany izany.
Ankehitriny, mazava ho azy, ny Filazantsara dia mampiseho fa betsaka kokoa no tokony hitranga na tokony hitranga alohan'ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ny fandringanana an'i Jerosalema sy ny tempoly fotsiny. Noho ny tsy fahatongavan’i Jesosy taorian’ny nianjeran’i Jerosalema, dia tsy afaka nanatsoaka hevitra ny Fiangonana fa diso izy. Ny synopika telo rehetra dia mamerina ny fampianarana ho an'ny fiangonana: mandra-pahitanareo ny "famantarana" ny Zanak'olona niseho tamin'ny lanitra, aza mihaino izay milaza fa efa tonga na ho avy tsy ho ela izy.
Tsy misy mahalala momba ny ora
Tonga eo amin'ilay hafatra lehibe tian'i Jesosy hampitaina amin'ny resaky ny Matio 24 isika. Tsy dia faminaniana ny teniny ao amin'ny Matio 24 fa kosa fampianarana milaza momba ny fiainana Kristiana. Ny Matio 24 dia fampitandreman'i Jesôsy tamin'ny mpianatra: miomàna ara-panahy hatrany, satria tsy hainao sy hainao ny fotoana hiverenako. Ireo fanoharana ao amin'ny Matio 25 dia maneho ny hafatr'io hafatra fototra io. Ny fanekena izany - fa tsy fantatra ny fotoana ary tsy mijanona - manala ny tsy fifankahazoana maro manodidina ny Matio 24 amin'ny indray mandeha. Milaza ny toko fa tsy te hanao faminaniana momba ny fotoana marina amin'ny "fiafarana" na fiverenany i Jesosy. Ny "famantaranandro" dia midika hoe: mifoha ara-tsaina hatrany, miomana foana. Ary tsy: arovy ny zava-mitranga eran-tany. Tsy nomena ny faminaniana "rehefa".
Araka ny hita tamin'ny tantara taty aoriana, tokoa i Jerosalema no tena ivon'ny zava-niseho sy fisolokiana maro. Tamin'ny 1099, ohatra, dia nanodidina ny tanàna ny crusaders kristiana ary namono ny mponina rehetra. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany, ny Jeneraly anglisy dia Allenby no naka ny tanàna ary nanala azy io avy tao amin'ny Fanjakana Tiorka. Ary ankehitriny, araka ny fantatsika rehetra, i Jerosalema sy i Jodasy dia mitana andraikitra lehibe eo amin'ny fifandirana jiosy-Arab.
Raha fintinina: Rehefa nanontanian’ny mpianany momba ny “raviana” ny farany i Jesosy, dia namaly hoe: “Tsy ho fantatrareo izany”. Fanambarana efa nisy ary toa sarotra levonina. Fa taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty, dia mbola nanenjika Azy ihany ny mpianany nanao hoe: Tompoko, moa amin'izao andro izao va Hianao hanangana fanjakana ho an'ny Isiraely indray? (Asan’ny Apostoly 1,6). Ary hoy indray Jesosy: “Tsy anjaranareo ny mahafantatra ny andro na ny ora izay voatendrin’ny Ray amin’ny heriny...” (and 7).
Na eo aza ny fampianaran'i Jesosy mazava, ny Kristiana dia namerina ny fahadisoan'ny apostoly tamin'ny fotoana rehetra. Ireo tsikombakomba miverimberina momba ny fotoana hiainanan'ny "faranana" dia niverimberina fatratra avy hatrany ny fiavian'i Jesosy. Saingy ny tantara dia nahatonga an'i Jesosy ho marina sy diso ho an'ny juggler isa tsirairay. Tsotra fotsiny: tsy fantatsika hoe rahoviana no ho tonga ny farany.
Inona izao no tokony hataontsika eo am-piandrasana ny fiverenan’i Jesosy? Namaly ny mpianany i Jesosy, ary mihatra amintsika koa izany. Hoy izy: “Koa miambena; satria tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny Tomponareo ... Izany no mahavonona anareo koa! Fa ho avy ny Zanak’olona amin’izay ora tsy eritreretinareo » (Matio 24,42-44). Ny hoe mailo amin’ny hevitry ny hoe “mijery ny zava-mitranga eran-tany” dia tsy midika eto. Ny hoe “mijery” dia manondro ny fifandraisan’ny Kristianina amin’Andriamanitra. Tsy maintsy miomana mandrakariva hiatrika ny mpamorona azy izy.
Amin'ny ambiny amin'ny 2nd4. Toko sy ao amin'ny 25. Ny toko dia manazava amin’ny antsipiriany bebe kokoa ny dikan’ny hoe “mpiambina” i Jesosy. Ao amin’ny fanoharana momba ny mpanompo mahatoky sy ratsy fanahy, dia nampirisika ny mpianatra izy mba hiala amin’ny fahotan’izao tontolo izao ary tsy ho resin’ny fanintonan’ny ota.4,45-51). Ny moraly? Nilaza i Jesosy fa “ho avy amin’ny andro tsy ampoiziny sy amin’ny ora tsy fantany” ny Tompon’ilay mpanompo ratsy fanahy.4,50).
Fampianarana mitovy amin’izany no ampianarina ao amin’ny fanoharana momba ny virijina hendry sy adala5,1-25). Misy amin’ireo virijiny no tsy vonona, tsy “mifoha” rehefa tonga ny mpampakatra. Ho voahilika amin'ny fanjakana ianao. Ny moraly? Hoy i Jesosy: “Koa miambena! Fa tsy fantatrareo na andro na ora » (25,13). Ao amin’ilay fanoharana momba ny talenta nankinina, i Jesosy dia niresaka momba ny tenany ho toy ny olona mandeha amin’ny dia iray5,14-30). Azo inoana fa nieritreritra ny hijanonany any an-danitra izy alohan’ny hiverenany. Ny mpanompo kosa dia tokony hitantana izay nankinina taminy tamin’ny tanana azo itokisana.
Farany, ao amin’ny fanoharana momba ny ondry sy ny osy, i Jesosy dia miresaka momba ny adidy amin’ny fitandremana omen’ny mpianatra mandritra ny fotoana tsy maha eo azy. Eto izy dia misarika ny sain’izy ireo avy amin’ny “ra” hiaviany amin’ny vokatry ny fiaviany ho amin’ny fiainana mandrakizay. Ny fiaviany sy ny fitsanganany amin’ny maty no ho andro fitsarana azy ireo. Ny andro nanasarahan’i Jesosy ny ondry (tena mpanara-dia azy) tamin’ny osy (ireo mpiandry ratsy fanahy).
Ao amin'ny fanoharana i Jesosy dia miasa miaraka amin'ny tandindona mifototra amin'ny filan'ny vatana ara-batana. Nomen-dry zareo sakafo izy, raha noana, nomeny hosotroina, nangetaheta, nentiny rehefa olon-tsy fantatra, nitafy azy rehefa niboridana. Gaga ny mpianatra ary nilaza fa tsy mbola nahita azy ho sahirana izy ireo.
Te hampiseho ny toetra tsaran’ny mpiandry anefa i Jesosy. “Lazaiko aminareo marina tokoa: Izay nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko” (Eks.5,40). Iza no rahalahin’i Jesosy? Iray amin’ireo tena nandimby azy. Koa nodidian’i Jesosy ny mpianany mba ho mpitandrina sy mpiandry tsara ny ondriny - ny fiangonany.
Toy izao no namaritana ny resaka lava nahavalian'i Jesosy ny fanontaniana telo nataon'ny mpianany: Rahoviana no rava i Jerosalema sy ny tempoly? Inona no "famantarana" ny fiaviany? Rahoviana no mitranga ny “faran'ny tontolo”?
Taitra ireo mpianatra nahare fa horavana ny tranon'ny tempoly. Manontany izy ireo hoe rahoviana izany no tokony hitranga ary rahoviana no tokony hitranga "ny farany". Araka ny nolazaiko, azo inoana fa nanantena i Jesosy hiakatra eo amin'ny seza fiandrianan'ny Mesia ary hametraka ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny heriny sy ny voninahiny rehetra. Nampitandrina momba io fomba fisainana io i Jesosy. Hisy nyemotra mialoha ny "farany". Ho ringana i Jerosalema sy ny tempoly, fa hitohy ny ain’ny fiangonana. Ny fanenjehana ny kristiana sy ny fahoriana mahatsiravina dia ho tonga any Jodia. Taitra ny mpianatra. Nihevitra izy ireo fa hahazo ny fandresena haingana ny mpianatr ny Mesia, dia ho resy ny Tany Nampanantenaina, haverina amin'ny laoniny ny fivavahana marina. Ary ankehitriny ireo faminaniana momba ny handravana ny tempoly sy ny fanenjehana ireo mpino. Fa misy lesona mahatsiravina hafa tokony hianarana. Ny "famantarana" ho hitan'ny mpianatr'i Jesosy dia ny fahatongavany izao.ny "famantarana" dia tsy manana fiarovana intsony izany satria tara. Izany rehetra izany dia mitarika amin'ny hafatr'i Jesosy izay tsy misy afaka milaza mialoha hoe rahoviana no ho tonga ny "farany" na rehefa hiverina i Jesosy.
Nandray lesona ara-panahy avy tamin’izany i Jesosy, rehefa nanahy ny mpianany. Ao amin'ny tenin'i DA Carson: "Valiny ny fanontanian'ny mpianatra, ary ny mpamaky dia andrasana hiandrandra ny fiverenan'ny Tompo ary, raha mbola tsy eo ny Mpampianatra, dia hiaina amim-pahatokiana, amim-pahatokiana, amin'ny maha-olombelona ary amin-kerim-po.4,45-25,46) »(Ibid., P. 495).